Foldable NIOSH धूल मास्क N95 मास्क
फेस मास्क Ffp3
Nitrile दस्ताने र लेटेक्स दस्ताने बीच के फरक छ?
Nitrile दस्ताने र लेटेक्स दस्ताने को बीच फरक मुख्य रूप मा बिभिन्न सामाग्री र उत्पादनहरु को बिभिन्न सुरक्षात्मक गुणहरुमा निहित छ। एक विशेष वातावरण मा, अपरेटरहरु गलत तरिकाले व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण वा अपर्याप्त सुरक्षा लगाएर घाइते भएका छन्, र केहि टी ...
"Nitrile पन्जा, पीवीसी पन्जा र रबर पन्जा" बीच के फरक छ?
किनभने डिस्पोजेबल दस्ताने nitrile रबर दस्ताने, पीवीसी पन्जा र प्राकृतिक लेटेक्स पन्जा सामाग्री अनुसार विभाजित गर्न सकिन्छ। त्यसोभए उनीहरु बीच के फरक छ? ए, सामाग्री फरक छ १. नाइट्राइल रबर पन्जा: सामाग्री NBR butadiene रबर को एक प्रकार हो, को मुख्य घटक ...
लेटेक्स दस्ताने को उत्पादन मा मोल्ड को सतह खुरदरापन को प्रभाव
उपन्यास कोरोनाभाइरस विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ, त्यहाँ सुरक्षा उपकरण, विशेष गरी सुरक्षात्मक मास्क र प्राकृतिक लेटेक्स पन्जा को माग मा वृद्धि भएको छ। प्रमुख सुरक्षात्मक उपायहरु मध्ये एक को रूप मा, चिकित्सा प्राकृतिक लेटेक्स दस्ताने उत्कृष्ट सुरक्षा र पृथकता प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
Nitrile पन्जा के हो? Nitrile र रबर पन्जा बीच के फरक छ?
19-06-03 मा व्यवस्थापक द्वारा
नाइट्राइल पन्जा, कहिले काहिँ नाइट्राइल पन्जा भनिन्छ, सुरक्षा र सुरक्षात्मक पन्जा नाइट्राइल रबर सामाग्री बाट बनेका छन्, जैविक रसायन, राम्रो भौतिकी, विरोधी स्थैतिक गुणहरु, आरामदायक शैली को लागी उत्कृष्ट प्रतिरोध संग, र सामान्यतया हार्डवेयर कारखानाहरु मा प्रयोग गरिन्छ, मेडिकल चेक-अप, खाद्य उद्यमी ...
प्रयोगशालाहरु वैज्ञानिक अनुसन्धान को लागी प्रयोग गरीएको कारण धेरै रूपहरु लिन्छन्। हामी पूरा प्रक्रिया पाइपिंग क्षमताहरु प्रदान गर्दछौं।